July 2013 ~ Myanmar News Updates
မြန်မာတို့ရဲ့အလန်းတကာ့အလန်းဆုံး Shweyoe Dictionary Version 3.0 ( 10 MB )
9:34:00 PM Myanmar News Updates No comments
မြန်မာတွေ ထွင်ထားသမျှ Dictionary တွေထဲမှာ နံပတ် ( 1) အလန်းဆုံး ဖြစ်မယ့် Dictionary လို့ကျနော်
ထင်ပါတယ်.. အင်္ဂလိပ် ၊ ရှရှား ၊ ထိုင်း ၊ ကိုရီးယား ၊ ဂျပန် ဘာသာစကားငါးမျိုးကနေ မြန်မာဘာသာလို့
ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်..မိမိသိချင်တဲ့စာလုံးကို အသံထွက်လည်းပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်.. ဖွဲ့စည်းမှုအသွင်အ
အပြင်လည်း သေသပ်မှုရှိပြီး အခြား Dictionary များထက် အားသာတဲ့အချက်တွေကတော့ ဒီအဘိဓာန်
ထဲမှာမပါတဲ့ စကားလုံးများ ဘာသာပြန်များကို ထပ်မံပေါင်းထည့်ပြီး မှတ်သားထားနိုင်သလို.. အင်တာနက်
နဲ့ချိတ်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင် မိမိရှာလိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ဒီအဘိဓာန်ထဲမှာမပါသော်လည်း နာမည်ကြီး
စွယ်စုံကျမ်းဗဟုသုတ Website ကြီးများဖြစ်တဲ့ Wikipedia နဲ့ Wikitionary တို့လို စွယ်စုံဝဘ်ဆိုဒ်များ
တွင် အလိုအလျောက်ရှာဖွေနိုင်ပါသေးတယ်...ပညာရပ်နယ်ပယ်အသီးအသီးတွင် လေ့လာလိုက်စားနေကြ
သော ကျောင်းသားကျောင်းသူများ..ဆရာ .ဆရာမများ အတွက် အထူးအသုံးဝင်ဆုံး..ဆောင်ထားဖို့
အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပြီး Online ရော.. .Offline ပါ Support ပေးတဲ့ မြန်မာ့နံပတ် 1 အဘိဓာန် Software
ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်မျာ...ဒီ Software ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် မိမိစက်မှာ NetFraem4ထည့်
သွင်းထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ခင်မျာ... NetFrame work ကိုတော့ မဖြစ်မနေဒေါင်းသွားကြဖို့မမေ့နဲ့နော်..
တော်တော်များများအတွက်လိုအပ်နေလို့ပါ.. ကဲ..ဒီပိုစ့်လေးကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင်www.mmithelper.com သို့လာလည်ကြပါဦးနော်..နည်းပညာဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကို Myanmar IT Helper မှာ ကူညီဖြေရှင်းပေးနေပါတယ်ခင်မျာ..အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ :)
Fileswap ကနေဒေါင်းမယ်ဆိုရင် Slow Download ကိုနှိပ်ဒေါင်းကြပါ။
Download Dictionary ==>ဒီမှာ
Internet Download Manager v1.0 for Android
8:35:00 PM Myanmar News Updates No comments
ကွန်ပျူတာတွေအတွက်တင် Internet Download Manager ဆော့ဝဲရှိတာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အခု Android ဖုန်းတွေအတွက်လည်း Internet Download Manager ဆော့ဝဲရှိပါတယ်။ ဖုန်းထဲမှာ ဒီဆော့ဝဲလေးကိုအသုံးပြုပြီး အင်တာနက်ကနေ သီချင်း ၊ ဗီဒီယိုနဲ့ တခြားဖိုင်တွေကို download လုပ်ကြည့်တာ သာမန် download လုပ်တာထက် နှစ်ဆ ၊ သုံးဆလောက်ကိုပိုမြန်နေပါတယ်။ Internet Download Manager v1.0 for Android ကိုအောက်က link မှာရယူပါ။
Internet Download Manager v1.0 for Android အားရယူရန် (Link 1)
Internet Download Manager v1.0 for Android အားရယူရန် (Link 2)
ကြေညာချက်။ ။ပြည်တွင်းပြည်ပ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေဖတ်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Myanmar Update Channel (www.myanmarupdatechannel.com) ကိုသာဝင်ရောက်ပါ
Viber Application လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Android User တွေကများ လို့ Android
1:11:00 PM Myanmar News Updates No comments
သမားတွေအတွက်ဘဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့အသစ်ထွက်တာလည်း Android တစ်မျိုး တည်းထွက်တာပါ။ Viber ဆိုတာကိုတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက် ထွေထွေထူးထူးပြောပြဖို့ မလိုလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော်။ အခု Version အသစ်မှာတော အဟောင်းထက်စာရင် နည်းနည်း ကလေးပေါ့ပါးသွပ်လက်သွားတယ်ဗျ။ Video File တွေကိုပါ
ပို့နိုင်နေပါပြီး နောက်ပြီး Sticker တွေကလည်း အများကြီး အသစ်ထပ်တိုးလာပါတယ်။ အလန်းလေးတွေချည်းဘဲပေါ့ ။ Theme Design ပါပြောင်းလဲသွားတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာ။ဒါကလည်း ကျွန်တော် အခုမှစပြီး သုံးကြည့်နေတုန်းပါဘဲ။ အားလုံးအ ဆင်ပြေပါတယ်။ Code လည်းထည့်စရာမလိုပါဘူး။ Auto Activate လုပ်ပြီး Code ထည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Android OS 2.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှစပြီးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Android အတွက် Skype ဗားရှင်းအသစ်
1:09:00 PM Myanmar News Updates No comments
ယနေ့တွင် Skypeသည် ၄င်း၏ Official Android appဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ 4.0 ကို လွှင့်တင်လိုက်ပြီဖြစ်ပြီး UI မှာ Windows Phone ၏ Metro UI ပုံစံ ဖြင့်မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပိုမို မြန်ဆန်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူအောင်လုပ်ထားကာ မြန်မြန်ဆန်ဆန် Message ပို့လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Down>> Skype 4.0.0.22082
ချောကလက် ပိုမိုစားရန်အံ့သြစရာကောင်းသောအကြောင်းရင်း(၃) ချက်
3:18:00 PM Myanmar News Updates No comments
ချောကလက်၏ သာလွန်ကောင်းမွန်သော အစွမ်းများထဲမှ များစွာတို့ကိုကောင်းစွာသိရှိကြသည်။ သို့သော် လူသိပ်မသိသော ၎င်း၏ ကျန်းမာရေးဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ပတ်သက်လို့ကရော မည်သို့နည်း။ မကြာသေးခင်က လေ့လာမှုများက ချောကလက်စားသုံးခြင်းသည် နှလုံးကျန်းမာရေးမှစ၍ သင့်ကို ပိန်ပိန်ပါးပါးထားရှိခြင်းအထိ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
ချောကလက်က မျက်စိအမြင်ကို ပိုမိုကောင်းစေသည်
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဗြိတိသျှလေ့လာသူများက အရွယ်ရောက်သူ လူငယ်များကို ချောကလက် အမည်းနှင့် အဖြူတစ်ခုခုကို စားခိုင်းကြသည်။ ထို့နောက်သူတို့၏ မျက်စိအမြင်ကို စမ်းသပ်ကြသည်။ပြန်လာကြပြီး အခြားချောကလက်အမျိုး
အစားကိုစား၍ စမ်းသပ်မှုကို ပြန်လုပ်ကြသည်။ ချောကလက်အဖြူနှင့် ယှဉ်လျှင်ချောကလက်အမည်းများက စမ်းသပ်ချက်
ရလဒ် အမှတ်များ ပိုမိုမြင့်နေသည်ကိုလေ့လာသူများ တွေ့ရှိကြသည်။မျက်စိအမြင်အပေါ် ချောကလက်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုက အသက်ပိုကြီးသော အရွယ်ရောက်သူများတွင် ပိုမိုကြီးမားနိုင်သည်ဟု စာရေးဆရာများက ထင်မြင်ချက်ပေးကြသည်။
သင် ချောကလက်တောင့် တစ်တောင့် ၀ယ်တော့မည်ဆိုလျှင် ကိုးကိုး ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိသော
ချောကလက်ကို ရွေးချယ်ပါ။ တစ်နေ့လျှင်ချောကလက် အောင်စတစ်ဝက် (သို့)ချောကလက်အများစု၏ ၂ လက်မ ပတ်လည်ခန့် စားပါ။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဂျာမန်လေ့လာမှုတစ်ခုက မည်းနက်သော ချောကလက်ထဲမှဖလေဘွန်နဲလ်သည်အရေပြားကိုUVအလင်း၏အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဗြိတိန်မှ ၂၀၀၉ခုနှစ် လေ့လာမှုတစ်ခုက အလားတူရလဒ်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် သင်၏အရေပြားကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သောဖလေဘွန်နဲလ်အဆင့်ကစံချိန်မီ ချောကလက်အများစုတွင် တွေ့ရသောဖလေဘွန်နဲလ်၏အဆင့်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်ကိုသတိပြုမိကြသည်။ လေ့လာမှုတွင် အသုံးပြုသော ဖလေဘွန်နဲလ်မြင့်သည့် အထူးသီးသန့် ချောကလက်က သွေးလည်ပတ်မှုနှင့် အရေပြားစိုစွတ်မှုကို မြှင့်တင်ပြီး၊ အ
ချောကလက်တောင့်ကို ရွေးချယ်သောအခါ ဖြစ်နိုင်သမျှ ပါဝင်ပစ္စည်းအနည်းဆုံး ချောကလက်ကိုရှာပါ။ သကြားများသော ချောကလက်ကို မလိုချင်ပါနှင့်။ ကိုကိုး အများဆုံး ချောကလက်ကိုရှာပါ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဂျာနယ်ထဲ၌ ဖော်ပြခဲ့သော အဆင့်မြင့် လေ့လာစစ်ဆေးမှု တစ်ခုကချောကလက် စားသုံးခြင်းသည် နှလုံးသွေးကြောရောဂါအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်မှု အန္တရာယ်ကို ၃ ပုံ၊ ၁ ပုံ လျှော့ချကြောင်း တွေ့ရှိသည်။
သီးခြားလေ့လာမှုများက ချောကလက်သည် သွေးတိုးနှုန်းကို လျှော့ချနိုင်ပြီး သွေးကြောကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်နိုင်၍ သွေးသကြားကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိသည်။
ကျန်းမာရေး အပိုဆုများကို လိုချင်ပါသလား။ ချယ်ရီ၊ ဗာဒမ်သို့မဟုတ် ချင်း ပါရှိသော ချောကလက်အမည်း အနည်းငယ်ကို စားပါ။ ကျန်းမာရေးညီညွတ်သော အခြားပါဝင်ပစ္စည်းပေါင်းစပ်ထားသော ချောကလက်မှ အာနိသင်ပေါင်းစုံကို သင် ရရှိလိမ့်မည်။
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒစနစ် အမှားကြောင့် တောင်သူများအကြွေးနွံနစ်ရဟုဆို
3:12:00 PM Myanmar News Updates No comments
လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၏မူဝါဒ စနစ်အမှားများကြောင့် တောင် သူများ အကြွေးနွံနစ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ် ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမားများကွန် ရက်မှဦးတင်ကိုလင်းကပြောသည်။
အစိုးရ၏ လယ်ယာစိုက်ပျိုး ရေးဘဏ်မှ လယ်စိုက်ရာသီများ အတွက် ချေးငွေများ ချေးယူခဲ့ ပြီး ရှစ်လအတွင်း ပြန်လည်ဆပ် ရမည်ဖြစ်၍ တောင်သူများ အ နေဖြင့် ချေးငွေများကို ရှာကြံဆပ် ရာမှ အကြွေးနွံနစ်ရခြင်းဖြစ် ကြောင်း ယင်းကဆိုသည်။
ဦးတင်ကိုလတ်က ''လယ်သ မားတွေက သွင်းအားစုထောက် ပံ့မှုတွေ လိုတယ်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် ဆိုရင် လယ်တွေလဲ စိုက်နေပြီ။ စိုက်စရိတ်လိုတယ်။ စိုက်ဘဏ် က ချေးပေးတယ်။ ပြီးတော့ ရှစ် လကြာရင်ပြန်ဆပ်ရမှာ။ စပါးပေါ် လို့ ပြန်ဆပ်မယ့်အချိန်မှာ စပါး ဈေးက မကောင်းဘူး။ ဒီလိုမျိုး ပြန်ဆပ်ဖို့ဆိုတာနဲ့တင် ပတ်ချာ တွေလည်ပြီး ဟိုကအတိုးနဲ့ဆွဲ၊ ဒီ ကအတိုးနဲ့ဆွဲ၊ အဲဒါနဲ့တင် ချာချာ တွေလည်ပြီး အကြွေးသံသရာ ဂယက်က မထွက်တော့ဘူးဖြစ် နေတယ်။ ဒီလိုမျိုး ရှစ်လပေး ချေး မယ့်အစား တစ်နှစ်ဆိုရင်ရော မ ဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ သေချာတာတစ် ခုက တောင်တန်းပေါ်မှာ တောင် ယာစနစ်က ပျောက်နေပါပြီ''ဟု ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ အကြွေးများ တစ်စတစ်စ များလာခြင်းမှစတင် ကာ လယ်သမားများ လယ်ဆုံးရှုံး မှုများရှိသကဲ့သို့ အစိုးရမှ သိမ်း ဆည်းခြင်းကြောင့် လယ်သမား များ လယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတော့ ကြောင်း ယင်းကဆိုသည်။
လွတ်လပ်သော တောင်သူ လယ်သမားများအသင်းမှ ဦးသိန်း အောင်က ''တောင်သူတွေ စိုက် ချိန်မှာ ချေးငွေမရလို့ အပြင်က အတိုးနှုန်းတွေ ကြီးစွာယူရတယ်။ ဒီကိစ္စက တစ်လနေလို့ မသိသာ ဘူး။ တစ်နှစ်နေလို့ရှိရင်လဲ သိပ် မသိတာဘူး။ နှစ်နှစ် သုံးနှစ်ဆို အတိုးရော အရင်းရော ပေါင်းရင် ထောင်ဂဏန်းကို ကပ်သွားရော။ ဒါတွေကစတင်ပြီး လယ်သမား တွေ အကြွေးနွံနစ်သွားတယ်။ ပြီး တော့ပြန်ဆပ်ဖို့မရှိတော့လယ်အပ် လိုက်ရတယ်။ ဒါတွေကို ကုပ်သွေး စုပ်ချင်တဲ့လူတွေကအပိုင်ကိုင်ထား တယ်။ ပြီးတော့ လယ်မဲ့ယာမဲ့တွေ ဖြစ်ကုန်ရော''ဟု ပြောသည်။
ပဲခူးအနောက်အုပ်စုမှ လယ် သမားဦးမောင်ဌေးက ''ဒီနှစ်စိုက် စရိတ်ချေးငွေကို အကြွေးကျေ မှ ချေးငွေ ချေးမယ်ဆိုတာကို ကြားရော လယ်သမားက စိုက်စ ရိတ်ရှိမှ လယ်စိုက်နိုင်မှာဗျ။ စိုက် စရိတ်မရှိဘဲနဲ့ ဘာကို သွားစိုက် မှာလဲ။ အဲဒါနဲ့ ရှိတဲ့ပစ္စည်းကို ပေါင်ပြီး ရောင်းပြီး အကြွေးဆပ် လိုက်တယ်။ အဲဒါတောင် ချေးငွေ ကို အခုထိမရသေးဘူးဗျ''ဟု ပြောသည်။
မန္တလေး မုဒိမ်းမှု ထက်ဝက်ကျော် ကလေးများတွင် ဖြစ်ပွား
3:11:00 PM Myanmar News Updates No comments
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး၏ အရွယ်မရောက်သေးသူများတွင် ဖြစ်ပွားသည့် မုဒိမ်းမှု (သက်ငယ် မုဒိမ်းမှု) နှုန်း တတိယအဆင့်တွင် ရှိနေသည့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ဇူလိုင်လ၂၇ ရက်နေ့ အထိ မုဒိမ်းမှု ဖြစ်ပွားမှုမှာ ၄၇ မှုရှိရာ သက်ငယ် မုဒိမ်းမှု ၂၆ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယင်းသည် စုစုပေါင်းအမှု၏ ထက်ဝက်ကျော် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံးထံမှ သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လစဉ်အလိုက် ဖြစ်ပွားသော မုဒိမ်းမှုများတွင် သက်ငယ် မုဒိမ်း ဖြစ်ပွားမှုများ တိုးလာသဖြင့် မှုခင်း ကျဆင်းရေး ဟောပြောပွဲများ ကျေးရွာအဆင့်ထိ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း အဆိုပါ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံးမှ ထပ်မံသိရသည်။
သက်ငယ် မုဒိမ်း ဖြစ်ပွားမှုသည် မြို့ပေါ်များထက် ကျေးရွာများတွင် ပိုမို ဖြစ် ပွားတတ်သဖြင့် ယင်းသို့ မူခင်း ကျဆင်းရေး ဟောပြောပွဲများ ပြု လုပ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံး ရဲမှူး ဦးစိုးငြိမ်းက ပြော ကြားသည်။
အဆိုပါ မူခင်း ကျဆင်းရေး ဟောပြောပွဲတွင် သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေခံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ဥပဒေ အရာရှိ များ၊ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ပူးပေါင်း၍ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု များ လျော့နည်း ကျဆင်းရေး ပညာပေး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်လာကြောင်း မန္တလေးခရိုင် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှူး ဦးဇော်တင်မိုးက ပြော ကြားသည်။
“သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင် ပညာရေးမှူးတွေက တစ်ဆင့် စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ဆရာမတွေက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကို ဂရုတစိုက် စောင့်ရှောက် ဖို့ ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ မသိတဲ့သူဆိုရင် ပြန်ထည့်ပေးတာတွေ မလုပ်ဖို့ မှာကြားထားပါတယ်” ဟု ဦးဇော်တင်မိုးက ထပ်မံ ပြောကြားသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း မုဒိမ်းမှု ၆၀ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ သက်ငယ် မုဒိမ်း ၃၁ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံးစာရင်းများအရ သိရသည်။
မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်၂၀၀၃ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ ၁၀ နှစ်တာ ကာလအတွင်း မုဒိမ်းမှု ၄၆၉၈ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ သက်ငယ် မုဒိမ်း ပြုကျင့်ခံရမှု ၂၃၀၂ မှု ရှိပြီး ၄၈ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ သက်ငယ် မုဒိမ်းမှုများ ဖြစ်ပွားမှု သုံးသပ်ချက်များအရ သိရသည်။
၁၀ နှစ်တာ ကာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် သက်ငယ် မုဒိမ်း ဖြစ်ပွားမှုမှာ နေပြည်တော်တွင် ၅၈ မှု၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ၁၀၃ မှု၊ ကယားပြည်နယ်တွင် ၁၀ မှု၊ ကရင်ပြည်နယ် တွင် ၅၂ မှု၊ ချင်းပြည်နယ်တွင် ၁၆ မှု၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ၁၅၁ မှု၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တွင် ၉၄ မှု၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ၂၃၂ မှု၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ၁၁၄ မှု၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ၂၄၉ မှု၊ မွန်ပြည်နယ်တွင် ၁၀၀ မှု၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၉၀ မှု၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် ၄၉၉ မှုနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ၃၈၆ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်ခံရသည့် အသက်အရွယ်များမှာ နှစ်နှစ်မှ ငါးနှစ်ထိ ၁၆၇ ဦး၊ ခြောက်နှစ်မှ ၁၀ နှစ် အထိ ၅၃၁ ဦး၊ ၁၁ နှစ်မှ ၁၃ နှစ်အထိ ၇၃၇ ဦး၊ ၁၄နှစ် အထက် ၈၆၇ ဦး ရှိပြီး ကျူးလွန်သူများတွင် အရပ်သား (သူစိမ်း) ၁၉၄၈ ဦး၊ ဝန်ထမ်း ၁၄ ဦး၊ တပ်မတော်သား ၂၉ ဦး၊ သံဃာ ၃၄ ဦး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ ဦး၊ ကျောင်းသား ၁၁ ဦး၊ ဖခင် ၈၅ ဦး၊ ပထွေး ၁၁၇ ဦးနှင့် ဆွေမျိုး ၁၂၂ ဦးတို့ ဖြစ်ကာ အဆိုပါ ကျူးလွန်သူများထဲတွင် အသက် ၁၆ နှစ်အောက် ကလေးသူငယ် ၇၆ ဦး ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ရုံးမှတ်တမ်း များအရ ထပ်မံ သိရသည်။
ကမ္ဘောဒီးယား ရွေးကောက်ပွဲ ဟွန်ဆန် အနိုင်ရဖွယ်ရှိ
3:10:00 PM Myanmar News Updates No comments
ဖနွမ်ပင်၊ ဇူလိုင် ၂၈
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ပဉ္စမ အကြိမ်မြောက် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ စတင်ကျင်းပနေရာ ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်၏ ပါတီ နေရာအများစု အနိုင်ရမည် ဟု လေ့လာသုံးသပ်သူများက ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC သတင်းတွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
မကြာသေးမီက ပြည်ပမှ ရောက်ရှိလာသော ဆမ်မ်ရန်စီ ခေါင်းဆောင်သော အတိုက်အခံများနှင့် ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်၏ ကမ္ဘောဒီးယား ပြည်သူ့ပါတီတို့ အဓိက ယှဉ်ပြိုင်သွားရမည် ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဆမ်မ်ရန်စီ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ပြည့်မီခြင်း မရှိသော်လည်း ၎င်း ပြန်လည် ရောက်ရှိလာခြင်းကြောင့် အတိုက်အခံများ ဘက်တွင် မျှော် လင့်ချက်များ တိုးပွားလာသည်။
ပါတီပေါင်း ရှစ်ခု ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်မည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးနိုင်သူပေါင်း ၉ သန်းကျော်အထိ ရှိသည်။
မဲရုံများ စတင် ဖွင့်လှစ်ပြီး မကြာမီ အချိန်အတွင်း အသက် ၆၀ အရွယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်က နေအိမ် အနီးရှိ မဲရုံ တစ်ခုတွင် မဲပေးခဲ့သည်။
၎င်းသည် ကမ္ဘောဒီးယား ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြာ တာဝန်ယူ ခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခု နီးပါးမျှ ထပ်မံ တာဝန်ယူလိုသေးသည်ဟု ထုတ်ဖော် ပြောကြားထားသည်။
အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဆမ်မ်ရန်စီမှာ အသက် ၆၄ နှစ်အရွယ် ရှိသူဖြစ်ပြီး မြို့တော် ဖနွမ်းပင်ရှိ မဲရုံများကို ထောက်ခံသူများနှင့်အတူ လှည့်လည် ကြည့်ရှုခဲ့သည်။
“မဲပေးဖို့ သွားနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးကို တွေ့ရတာ အရမ်း ဝမ်းသာတယ်” ဟု ကမ္ဘောဒီးယား အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဆမ်မ်ရန်စီက ပြောကြားသွား သည်။
ကမ္ဘောဒီးယား ကျေးလက် ဒေသများ၌ အာဏာရ ပြည်သူ့ပါတီ အပေါ် ထောက်ခံမှု တိုးပွားနေပြီး ပြီးခဲ့သည့် ပါလီမန် ရွေးကောက်ပွဲတွင်း အမတ်နေရာပေါင်း ၁၂၃ နေရာ ရှိသည့်အနက် နေရာပေါင်း ၉၀ အထိ အနိုင် ရရှိထားသည်။
ယင်းကဲ့သို့ လူထု ထောက်ခံမှု မြင့်မားခြင်းမှာလည်း ခမာနီခေတ်လွန် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန် ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်က စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဆမ်မ်ရန်စီ ခေါင်းဆောင်သော အမျိုးသား ကူညီကယ်ဆယ်ရေး ပါတီ ကမူ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ်ပေးမည်ဟူသော ကတိဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင်း ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နေသည်။
ကမ္ဘောဒီးယား လူငယ် အများစုက အတိုက်အခံ ပါတီကို မဲပေးမည် ဟု လေ့လာ သုံးသပ်သူများက ခန့်မှန်းထားသော်လည်း မီဒီယာများကို အစိုးရအဖွဲ့ကသာ ချုပ်ကိုင်ထားခြင်း၊ လွတ်လပ်၍ မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်နိုင်ခြင်း စသည့် အချက်များကြောင့် အတိုက်အခံများ အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်ပွဲမှာ ခက်ခဲနေကြောင်း BBC သတင်းတွင် သုံးသပ်ထားသည်။
လက်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲ၌ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသား ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် သူ ၄၀,၁၉၀ ဦးနှင့် နိုင်ငံခြားသား ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်သူ ၂၆၆ ဦး စုစုပေါင်း ၄၀,၄၅၆ ဦးထိ ပါဝင် စောင့်ကြည့်နေ ကြောင်း Xinhua သတင်း တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အနုပညာ အမျိုးမျိုး ဖန်တီးခွင့်ရှိလာသူ ချမ်းမီမီကို
3:09:00 PM Myanmar News Updates No comments
လတ်တလောမှာတော့ ချမ်းမီမီကိုက ဒါရိုက်တာ တင်အောင်ကျော် ရိုက်ကူးတဲ့ 'အစွန်းရောက်' ဇာတ်ကားကို သူထူးစံနဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်နေ ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ ချမ်းမီမီကိုက စားသောက်ဆိုင်မှာ သီချင်းဆို တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ် ဆောင်ထားပါတယ်။
"ချမ်းမီ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဒရာမာဇာတ်တွေကို အဓိက ရိုက်ဖြစ်ပါ တယ်။ ဟာသလည်း ရိုက်ဖြစ် တယ်။ ဒါပေမဲ့ ချမ်းမီလုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ပရိသတ် တွေဆီကို ဇာတ်ရုပ်အစုံနဲ့ ချပြချင်ပါတယ်။ ချမ်းမီ က ဟာသ
ဇာတ်ရုပ်တွေ၊ ဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဒရာမာ ဇာတ်ကားတွေနဲ့လည်း လိုက်တယ်လို့ ပရိသတ် တွေဆီက စကားသံတွေ ပြန်ကြားရပါတယ်" လို့ ပရိသတ်အတွက် ဇာတ်ရုပ်အစုံ ရိုက်ပြချင် ကြောင်း ချမ်းမီမီကို က ပြောပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်း အနုပညာအလုပ် လုပ်ရတာ အရင်ကထက် ပိုပြီး ပွင့်လင်း
လာသလို၊ ပိုပြီးလည်း လွတ်လပ် လာကြောင်း ချမ်းမီမီကို က ပြောပါတယ်။ "ဒီခေတ်က ပွင့်လင်းလာ သလို၊ ပိုပြီး လွတ်လပ်လာတယ်။ အနု ပညာကို အမျိုးမျိုး ဖန်တီး ခွင့်ရှိလာတယ်။
ကိုယ် ရောက်တဲ့ နေရာကိုလည်း ဘယ်သူမဆို ကြိုးစားပိုင် ခွင့်ရှိတယ်။ ပွင့်လင်းလာ တာနဲ့အမျှ ဗီဒီယိုကား တွေကိုလည်း သေချာစိ စစ်ပြီး ရိုက်ကူးပါတယ်။ အခုဆင်ဆာ လွတ်လပ် ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကလည်း သူ့ အပိုင်းနဲ့သူ ကန့်သတ်ထားတယ်။ ဇာတ်ကားရိုက်ရင် နိုင်ငံခြားလိုတအားကြီး Social ကျမယ့် ကားမျိုးကို ချမ်းမီလုံးဝရိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး"လို့ ချမ်းမီမီကိုက
3:06:00 PM Myanmar News Updates No comments
မန္တလေး၊ ဇူလိုင် ၂၈
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တံတားဦးမြို့နယ် မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် မန္တလေးမှ မြစ်ကြီးနားလေဆိပ်သို့ လိုက်ပါမည့် ခရီးသည်များကို ရှာဖွေ စစ်ဆေးစဉ် ခရီးသည် တစ်ဦး၏ ဘောင်းဘီအိတ် အတွင်း၌ သတ္တုဘူးအတွင်း ထည့်ထားသည့် ဘိန်းဖြူများ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံးထံမှ သိရသည်။
ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီ ၁ မိနစ်ခန့်က အဲပုဂံ လေကြောင်းလိုင်းမှ ခရီးစဉ် အမှတ် W9 417 လေယာဉ်နှင့် မြစ်ကြီးနား လေဆိပ်သို့ လိုက်ပါမည့် ခရီးသည်များကို X-Ray ဖြင့် လေကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့များက ရှာဖွေ စစ်ဆေးစဉ် ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်ပြီး ကျောက်အရောင်းအဝယ် လုပ်ကိုင်သူ အောင်ဇော်ထွန်း ၂၁ နှစ်၏ ဘောင်းဘီအိတ် အတွင်းမှ သတ္တုဘူးအတွင်း ထည့်ထားသည့် ဘိန်းဖြူမှုန့် ၀ ဒသမ ၀၁ ဂရမ် (တန်ဖိုး ကျပ် ၅၀၀၀) နှင့် ဆေးထိုးပိုက် တစ်ချောင်းတို့ကို သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ရုံးထံမှ ထပ်မံ သိရှိရသည်။
အဆိုပါ ဘိန်းဖြူများကို ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် သင်ပန်းကုန်း ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူ ကိုကြက် (ခ) ကြက်ထွန်းထံမှ ဝယ်ယူခဲ့သဖြင့် ၎င်းကို ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးလျက်ရှိကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ယင်းလေဆိပ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး လက်ဝယ် တွေ့ရှိသူ အောင်ဇော်ထွန်းနှင့် ကိုကြက်တို့ကို လေဆိပ် နယ်မြေ ရဲစခန်းတွင် မူးယစ် အမှုအမှတ် (ပ)၂/၂၀၁၃ မူး/စိတ် ၁၅/ ၁၆ (ဂ)၂၁ အရ အမှု ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံးထံမှ သိရသည်။
နွားထိုးကြီးတွင် မိုးခေါင်၍ နှမ်းစိုက်ခင်းအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတပြောကြား
3:02:00 PM Myanmar News Updates No comments
နေပြည်တော်- မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး နွားထိုးကြီးဒေသတွင် မိုးခေါင် ၍ နှမ်းစိုက်ခင်းအားလုံး ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့နယ် အလျင်လိုကျေးရွာတွင် ဇူလိုင် ၂၈ ရက်က ပြောကြားသည်။
“နွားထိုးကြီးမှာ မိုးခေါင်လို့ စိုက်ထားတဲ့နှမ်းတွေ အကုန်လုံးသေကုန်တယ်”ဟု အဆင့်မြင့်လယ်ဧက ၄၄၀ နွေစပါးကောက်ရိတ်သိမ်းပွဲ အခမ်းအနားတွင် သမ္မတက အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“တောင်သူလယ်သမားတွေ အတော်လေးဒုက္ခရောက်နေတယ်”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မိုးနည်းရေရှား ရပ်ဝန်းဒေသတွင်ပါဝင်သော အဆိုပါအပူပိုင်းဇုန်ဒေသရှိ အခြားမြို့နယ်များတွင်လည်း ထိုကဲ့သို့ပင် သီးနှံများဆုံးရှုံး ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံအချို့က ပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်း သေတာပဲ။ မိုးမှမရွာတာ။ ကျန်တဲ့အပင်လည်း လဲလုလဲခင်းပဲ”ဟု ပခုက္ကူဒေသခံ ကိုမိုးအောင်က ပြောသည်။
လက်ရှိရာသီဥတုအခြေအနေအရ ပျဉ်းမနားမြို့အောက်ပိုင်းတွင်သာ မိုးရွာပြီး အထက်ပိုင်းဒေသများတွင် မိုးခေါင်နေကြောင်း၊ စိတ်မချရသော မျှော် ကိုး၍မရသော ရာသီဥတုဖြစ်လာပြီး အစိုးရပိုင်းကလည်း မည်သို့ ကူညီရမည်ကို စဉ်းစားဖွယ်ရာဖြစ်လာကြောင်း သမ္မတက ပြောကြားခဲ့သည်။
နေပြည်တော်ရှိ အဆင့်မြင့် လယ်ယာ(သို့မဟုတ်) စက်မှုလယ်ယာစိုက် ကွင်းများတွင် မပါဝင်သော လယ်များသည် မိုးစပါးစိုက်ပျိုးရန်အတွက် ရေအ လုံအလောက်မရရှိ၍ စောင့်ဆိုင်းနေရလျက်ရှိရာ ယခုရက်ပိုင်းရွာသွန်း လာသောမိုးကြောင့် အချို့စိုက်ပျိုးနိုင်ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံလယ်သမား များကပြောသည်။
ထို့ကဲ့သို့သော ရာသီဥတု အခြေအနေများကြောင့် “လယ်တွေကို ဆည်ရေသောက်ဖြစ်အောင် ပြုပြင်ဖို့လိုတယ်”ဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ သီးနှံစိုက် ဧရိယာ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် မိုးရေသောက်ဧရိ ယာများဖြစ်ပြီး ဆည်ရေသောက်ဧရိယာမှာ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိကြောင်း စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းဝင်းကဆိုသည်။
ရှိပြီးသားဆည်များ၏ ရေသောက်ဧရိယာများသည်လည်း မူလလျာထားချက်၏ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်မျှသာ ရေပေးနိုင်ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်အချို့က ထောက်ပြပြောဆိုကြသည်။
စက်မှုလယ်ယာ ဧက ၄၄၀စံပြစိုက်ခင်း ကောက်ရိတ်သိမ်းပွဲသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တက်ရောက်စဉ်
ဓာတ်ပုံ - သန်းထူး
အတိုက်အခံများ ကန့်ကွက်သော်လည်း ကူဝိတ် ရွေးကောက်ပွဲ ဆက်လက် ကျင်းပ
3:01:00 PM Myanmar News Updates No comments
ကူဝိတ်စီးတီး၊ ဇူလိုင် ၂၇
ကူဝိတ် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီ အချို့က ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ထားသော် လည်း တစ်နှစ်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပါလီမန် ရွေးကောက်ပွဲကို ဆက်လက် ကျင်းပနေကြောင်း BBC သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပါလီမန် လွှတ်တော်ဟောင်းကို ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားသည့် နည်းလမ်းများ မှားယွင်းနေ ကြောင်း အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးက အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပါလီမန်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲသစ်များ ထပ်မံ ပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ပင်လယ်ကွေ့ဒေသ နိုင်ငံများအနက် ကူဝိတ် ပါလီမန်မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် အများဆုံးရှိသည့် ပါလီမန် ဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံရေး တင်းမာမှုများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုများ မကြာခဏ ရပ်ဆိုင်းနေရသည်။
ထို့အပြင် ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲ များတွင် အသုံးပြုသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ တရားမျှတမှု မရှိဟုဆိုကာ လစ်ဘရယ် ဝါဒီများ၊ အစ္စလာမ္မစ် ဝါဒီများနှင့် လူမျိုးစု ခေါင်းဆောင်များက ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
ဥပဒေသစ်ရ မဲဆန္ဒရှင်များ အနေနှင့် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးသာ ရွေးခြယ်ခွင့် ရမည်ဖြစ်ပြီး ယခင်က ကိုယ်စားလှယ် လေးဦးထိ ရွေးချယ်ခွင့် ပြုထားသည်။
အတိုက်အခံများကို အင်အား လျော့နည်းစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေသစ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဥပဒေ အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်လိုပါက ပါလီမန် အတည်ပြုချက် ယူရမည်ဟု အတိုက်အခံများ မှတ်ချက်ပြုသည်။
ကူဝိတ် ပါလီမန်၌ ဥပဒေပြုခွင့် အာဏာရှိသလို အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ ကိုလည်း ဆင့်ခေါ်နိုင်ခွင့် ရှိသည်။
သို့သော် ကူဝိတ် စော်ဘွားကသာ နိုင်ငံ၏ အရေးကြီး ကိစ္စများကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဝန်ကြီးအဖွဲ့များကိုလည်း စော်ဘွား ကိုယ်တိုင် ရွေးခြယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံ၏စနစ်များ ခိုင်မာအားကောင်းမှု မရှိခြင်း၊ ခုနစ်နှစ် အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ ခြောက်ကြိမ် တိုင်တိုင် ကျင်းပခြင်း စသည့် အချက် များကြောင့် လက်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲကို ကူဝိတ် နိုင်ငံသားများက စိတ်ဝင်စားမှု မရှိတော့ပေ။
ရာမန်ဒန် ဘာသာရေးပွဲတော် ကာလတွင်း ကျရောက်နေခြင်းနှင့် နေအပူချိန် အလွန်အမင်း မြင့်တက် နေခြင်းတို့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ၌ မဲပေးသူများမည် မဟုတ်ဟု BBC သတင်းတွင် သုံးသပ်ထားသည်။
ကူဝိတ်နိုင်ငံတွင်း နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုများ တိုးပွားနေခြင်းကြောင့် လတ်တလော ရင်ဆိုင်နေရသော အခြေခံ အဆောက်အဦ မလုံလောက်မှု၊ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှုန်း နှေးကွေးမှု စသည့် အချက်များကို အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိ ဖြစ်နေသည်။
ကောင်းကျိုးမပေးသည့် ဆေးလ်ိပ်ကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
3:00:00 PM Myanmar News Updates No comments
ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူတွေမှာ အစာအိမ်နာဖြစ်သွားမှု့ ဟာ နှစ်ဆသာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လေ့လာချက်အတော်များများအရ ဆေးလိပ်ကို နှစ်ရှည်လများ သောက်သုံးခြင်းဟာ အစာအိမ်ရဲ့ နံရံ၊ သွေးစီးဆင်းမှု့ ကိုပြောင်းးလဲစေပြီး အစာအိမ်ယောင်ယမ်းမှု့ ကို ဖြစ်စေတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီအပြင်ကို ဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်းဟာ
အစာအိမ်နာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများဖြစ်တဲ့ အစာအိမ်ပေါက်ခြင်း ၊ အစာအိမ်သွေးယိုခြင်းတို့ ကိုလည်း ဖြစ်စေပြီး အနာကျက်မှု့ ကိုလည်းနှောင့်နှေးစေပါတယ်။
(၂) ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေများ
ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူတွဟော အခြားသူတွထေက် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ အရမ်းများပါတယ်။ ကင်ဆာထဲမှာမှ အဆုတ်ကင်ဆာ (Lung Cancer)၊ လည်ချောင်းကင်ဆာ (Throat Cancer)၊ နှင့် ခံတွင်း ကင်ဆာ (Oral Cancer) များ အဖြစ်များပါတယ်။ ထို့ ပြင် ကျောက်ကပ်ကင်ဆာ (Kidney Cancer)၊ အစာရေကင်ဆာ ( Oesophagus Cancer) ၊ ဆီးအိမ်ကင်ဆာ (Bladder Cancer) ၊ ပန်ကရိယကင်ဆာ ( Pancreas Cancer) ၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ( Cervical Cancer) တို့ ဖြစ်ပွားမှု့ နဲ့ ပါ ဆက်စပ်လျက် ရှိပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သုံးတဲ့ နှစ်ရှည်လေလေ သောက်သုံးတဲ့ အရေအတွက် များလာ လေလေ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ နှုန်း ပိုပိုများလာလေလေပါဘဲ။
နီကိုတင်းကြောင့် ကိုလက်စတရော (Cholesterol) နဲ့ သွေးတွင်း အဆီဓါတ်တွေ များလာပြီး နှစ်ကြာလာတဲ့ အခါမှာ သွေးကြောနံရံတွေ ထူလာပြီး သွေးကြောတွပေါ ကျဉ်းလာစေတယ်။ သွေးကြောတွေ ကျဉ်းလာတဲ့အခါမှာ သွေးများဟာ ကောင်းစွာ မစီးဆင်းတော့ဘဲ သွေးခဲမှု့ တွေ ဖြစ်စေကာ သွေးကြောတခုလုံးကို ပိတ်စေပါတယ်။
နှလုံး မှာရှိတဲ့ သွေးကြောများ ပိတ်သွားပါက နှလုံးသို့ သွေးရောက်အောင် မပို့နိုင်တော့ဘဲ Heart Attack ဖြင့် သေဆုံးသည်ထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဦးနှောက်အတွင်းရှိ သွေးကြောများ ပိတ်ပါက လေတခြမ်းဖြတ်ခြင်း နှင့် လေဖြန်းခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ် အတွင်းရှိ သွေးကြောများ ပိတ်သွားပါက ကျောက်ကပ်ကိုပါ ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ခြေထောက်မှာ ရှိတဲ့ သွေးကြောများ ပိတ်သွားပါက သွေးမလျောက် နိုင်တော့ဘဲ ပုပ်သွားကာ ခြေထောက် ဖြတ်ပစ်ရသည်ထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်ဟာ ကိုယ်တွင်းက အဓိက အင်္ဂါတွေ အကုန်လုံးကို တိုက်ရိုက်ဆိုးကျိုးတွေ ပေးပါတယ်။
ဆေးလိပ် သောက်သူ တွဟော ချောင်းခဏခဏ ဆိုးတတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ဆေးလိပ်ကြောင့် အဆုတ်အတွင်းရှိ လေအိတ်ငယ်လေးတွေ ပျက်စီးပြီး လေပြွန်ကိုလဲ ယောင်ယမ်းစေကာ လေပြွန်ကြော တလျောက်လုံးကိုပါ ကျဉ်းမြောင်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချောင်းခဏခဏဆိုးခြင်း နှင့် အသက်ရှုမဝခြင်း တို့ကိုပါ ဖြစ်စေပါတယ်။
ဆေးလိပ်ဟာ သွားတွေကို ဝါစေပြီး ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်း တို့ကိုဖြစ်စေပြီး ခံတွင်းကျန်းမာရေး ကိုပါ ထိခိုက်စေပါတယ်။
ဆေးလိပ်ကြောင့် သွေးကြောနံရံတွေ ပျက်စီးပြီး သွေးတိုးရောဂါ ကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါ ဟာလည်း နှလုံးရောဂါ နှင့် လေဖြတ်ခြင်း တို့ ကိုဖြစ်စေဖို့တွန်းအားတခု ပါဘဲ။
ဆေးလိပ်မှာ ပါတဲ့ နီကိုတင်းဟာ အမျိုးသားတွရေဲ့ လိင်အင်္ဂါ မှာရှိတဲ့ သွေးကြောတွေကိုပါ ကျဉ်းစေပါတယ်။ သွေးကြောကျဉ်းပြီး သွေးကောင်းစွာ မစီးဆင်မှု့ ကြောင့် လိင်င်္ဂါရဲ့မျိုးပွား ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ကိုထိခိုက်ပြီး(Erectile Dysfunction) ဖြစ်စေပါတယ်။ အသက် ၃ဝ မှ ၄ဝကြား ဆေးလိပ်သောက်သုံးတဲ့ အမျိုးသားများရဲ့ ၅၀% ဟာ Erectile Dysfunction ကိုခံစားရ တတ်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ မိခင်တွမှော ကလေးမွေးဖွားပါက လမစေ့ဘဲ မွေးခြင်း နှင့် ပေါင်မပြည့်ခြင်း တို့ကိုပါ ဖြစ်စေပါတယ်။
မိဘတစ်ဦးဦးက ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူ ဖြစ်နေပါက အတူနေထိုင်တဲ့ ကလေးငယ်မှာ ပန်းနာရင်ကျပ် နှင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ ဖြစ်စေဖို့ အခွင့်အလမ်း များပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိမိအတွက် ကောင်းကျိုးများ မရှိ ဘေးအတိဒုက္ခများကိုသာ ပေးနေသော ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို သင်တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ပြီး အလျင်အမြန် သောက်သုံးခြင်း မပြု့ ကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတော့သည် ခင်ဗျာ …..
ဆေးလိပ်ကင်းဝေး၍ အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ ……….
မြင်အောင်ကြည့် သိအောင်ဖတ် ဖြတ်နိုင်အောင် ကြိုးစား.
အမျိုးသမီးများကို ဝမ်းဗိုက်နာကျင်စေခြင်း အကြောင်းရင်း ( ၅ ) ချက်
2:44:00 PM Myanmar News Updates No comments
အမျိုးသမီးအများစုဟာ ဗိုက်အောင့်ခြင်း အဖြစ်များပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာခြင်းဟာ အောက်ပါအကြောင်းရင်း ငါးရပ်ကြောင့် အဖြစ်များပါတယ်။
၁။ သားအိမ်အတွင်းလွှာ နေရာလွှဲခြင်း
ဖြစ်ပွားနှုန်း - အမျိုးသမီး ငါးသန်းနီးပါး
သားအိမ်တစ်သျှူးတွေနဲ့တူတဲ့ ဆဲလ်တွေဟာ နေရာလွဲမှားတည်ရှိပြီး ရာသီသွေးဆင်းတိုင်း လိုက်လံကွာကျနေတာမျိုးပါ။
ခံစားရတတ်သော လက္ခဏာများ - ရာသီလာချိန်မှာ ရောပြီး ဗိုက်အောင့်ခြင်းကို ဆိုးဆိုးရွားရွားခံစားရခြင်း၊ ခါးနဲ့ခြေထောက် အထိနာကျင်ခြင်း
စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း - တစ်သျှူးအသားစယူ စစ်ဆေးခြင်း
ဆေးကုသမှု - Ibuprofen, Naproxen sodium စတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေနဲ့ ဟော်မုန်းပါ သန္ဓေတားဆေးတွေ သုံးပြီး ကုသလေ့ရှိပါတယ်။ ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ သားအိမ်အတွင်းလွှာကြီးထွားမှုကို ဖယ်ရှားဖို့ ခွဲစိတ်ကုသတဲ့နည်းကို သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
ဖြစ်ပွားနှုန်း - အမျိုးသမီး သုံးသန်းနီးပါး
ရောဂါအကြောင်း -ဆီးအိတ်ထဲမှာ မကြာခဏ မသက်မသာဖြစ်ရတဲ့ ခံစားချက်မျိုးပါ။ ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ဆီးအိတ်တာရှည် ရောင်ရမ်းတာပါ။
ခံစားရတတ်သော လက္ခဏာများ - ဆီး မကြာခဏ သွားချင်တာနဲ့ ဆီးသွားတဲ့အခါ နာကျင်တာတွေကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။
စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း - ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်းဟုတ်၊ မဟုတ် သေချာအောင် ဆီးထဲမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ ဆီးအိတ်ကို Cytoscope သုံးပြီး ကြည့်ရှုခြင်း။
၃။ ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းရှိ ကြွက်သားများ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း
ဖြစ်ပွားနှုန်း - အဖြစ်များပေမယ့် လူဦးရေ ဘယ်လောက်မှာ ခံစားနေရမှန်း အတိအကျမသိပါ
ရောဂါအကြောင်း - ရုပ်ပိုင်းနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေနှစ်ရပ်စလုံးဟာ တင်ပါးဆုံအင်္ဂါတွေကို ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ တင်ပါးဆုံကြွက်သားတွေအပေါ် နာတာရှည် ဖိအားသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။
ခံစားရတတ်သော လက္ခဏာများ - ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းနာကျင်ခြင်း၊ မိန်းမကိုယ်နာကျင်ခြင်း၊ ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ ဆီးပြွန်နာကျင်ခြင်း
စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း - ခန္ဓာကိုယ်ကို စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခြင်း (Physical Examination)
၄။ ဝမ်းဗိုက်တွင်း သွေးကြောထုံးခြင်း
ဖြစ်ပွားနှုန်း - အမျိုးသမီး ခုနစ်သန်းနီးပါး
ရောဂါအကြောင်း - ဝမ်းဗိုက်ထဲက သွေးကြောတွေ ထုံးတာကြောင့် နာကျင်မှု ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ခြေထောက်သွေးကြောထုံးခြင်းလိုပဲ သွေးပြန်ကြောထဲက အဆို့ရှင်တွေဟာ အားနည်းပြီး သွေးစီးဆင်းအားနည်းတာကြောင့် နာကျင်တဲ့ ဖိအားကို ဖြစ်စေပါတယ်။
ခံစားရတတ်သော လက္ခဏာများ - ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းမှာ စူးစူးရှရှအောင့်ခြင်း၊ နံနက်ခင်းမှာ သိပ်မနာဘဲ တဖြည်းဖြည်း ပိုမိုနာကျင်လာခြင်း (လဲလျောင်းလိုက်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် အပူကပ်တဲ့အခါမှာ နာကျင်မှု ပိုဆိုးတတ်ပါတယ်)
စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း - Transcervical venogram လို့ခေါ်တဲ့ အထူးစစ်ဆေးနည်းသုံးပြီး ပုံမမှန်သွေးပြန်ကြော အရွယ်အစားနဲ့ သွေးစီးဆင်းနှုန်းကို တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
၅။ တာရှည် မိန်းမကိုယ်နာခြင်း
ဖြစ်ပွားနှုန်း - အမျိုးသမီး ခြောက်သန်းနီးပါး
ရောဂါအကြောင်း - တာရှည်မိန်းမကိုယ်နာတာဟာ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရသလဲဆိုတာ သေချာမသိသေးပါ။ မှိုကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို မြင်းစီးခြင်းနဲ့ ကလေးမွေးဖွားရာမှ နာ့ဗ်ကြော ထိခိုက်သွားတာကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ခံစားရတတ်သော လက္ခဏာများ - မိန်းမကိုယ်မှာ တာရှည်နာကျင်မှု ဒါမှမဟုတ် သက်သာလိုက် ပြန်ဖြစ်လိုက် နာကျင်မှုဟာ တင်ပါးနဲ့ ပေါင်ရင်းနေရာအထိ ပျံ့နှံ့သွားတတ်ခြင်း၊ ရာသီသွေးထိန်းတောင့်ထည့်ခြင်း၊ ကျပ်တဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ခြင်းနဲ့ အထိုင်များခြင်းတွေကြောင့်လည်း မိန်းမကိုယ် နာကျင်တတ်ပါတယ်။
စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း - နာကျင်မှုကို စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ မိန်းမကိုယ်ဝကို စစ်ဆေးတဲ့ Cotton Swab test နဲ့ စစ်ဆေးလေ့ရှိပါတယ်။
ဘ၀မှာ ဘာက အရေးကြီးဆုံးလဲ ????
9:10:00 AM Myanmar News Updates No comments
အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ ABCD . . . Z အထိဆိုရင် ၂၆ လုံး ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အက္ခရာတွေကို ဒီလို
နံပါတ်စဉ်တွေ ထိုးပြီး စီကြည့်ရအောင် . . .
A=1, B=2, C=3, D=4, E=5,
F=6, G=7, H=8, I=9, J=10,
K=11, L=12, M=13, N=14, O=15
P=16, Q=17, R=18, S=19, T=20
U=21, V=22, W=23, X=24, Y=25, Z=26
အဲဒီလို စီပြီးသွားရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ အက္ခရာကို ကိုယ်စားပြုတဲ့
နံပါတ်တစ်ခုစီ ရှိသွားပါပြီ။ကဲ ဘ၀မှာ ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်ဖို့ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ တွက်ကြည့်ကြစို့။
11+14+15+22+12+5+4+7+5 = 96 %
ဒါဆိုရင်တော့ မဟုတ်သေးဘူး။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အပြည့်ရနိုင်မယ့်
အကြောင်းတရား တခုခုတော့ ရှိရမယ်။
မဟုတ်ပြန်ဘူး . . . ပိုက်ဆံကလည်း ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းပဲ စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်။ ဒါဆိုရင်....
၆။ ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အသွေး (Leadership)
12+5+1+4+5+18+19+8+9+16 = 89 %
ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းရင်တော့ ၈၉ ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
ပြဿနာတိုင်းမှာ အဖြေဆိုတာ ရှိစမြဲပါ။ အဲဒီတော့ ပြဿနာရဲ့ အဖြေကို
စိတ်နေစိတ်ထားလေး ပြောင်းပြီး စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ ဟုတ်ပြီ . . .
ရပါပြီ . . . ဘ၀ကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်မှုပေးနိုင်တဲ့ အရာကတော့
စိတ်နေစိတ်ထားပါပဲ။ “Attitude is everything ” လို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့
စိတ်နေစိတ်ထားကို ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံး ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
အခု အဖြေကို သိရပါပြီ။ ကဲ . . . ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ . . . ။
9:07:00 AM Myanmar News Updates No comments
လူတစ်ယောက်ကိုချစ်နေရတယ် ဆိုတာ အိပ်မက်လေးတစ်ခုမက်နေရသလိုပဲ ...
— အဲ့ဒီအိပ်မက်လေးက အပြင်မှာ တကယ်မဖြစ်ရင်တောင်မှ အရမ်းကိုတန်ဖိုးထားတတ်ခဲ့တယ်
— အဲ့ဒီအိပ်မက်လေး ပျောက်ပျက်သွားမှာလည်းစိုးရိမ်တတ်ခဲ့တယ်
— နောက်ဆုံး အဲ့ဒီအိပ်မက်လေး တကယ်ပျောက်ပျက်သွားခဲ့ရင်တောင် နောက်ထပ်ပြန်မက်လာမလားလို့မျှော်လင့်တကြီးစောင့်စားတတ်ခဲ့သေးတယ် ..
အဲ့ဒီလိုပဲ လူတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ခဲ့မိပြီဆိုရင်လေ ..
— သူ့ဘက်က ကိုယ့်ကိုချစ်မှန်းမသိ မချစ်မှန်းမသိ ဘာမှမသိပါပဲနဲ့လည်း ကိုယ်က သူ့ကိုတန်ဖိုးထားတတ်ခဲ့တယ်
— တစ်ချိန်ချိန်မှာ သူကိုယ့်အနားကထွက်သွားမှာကိုလည်း တွေးပြီးစိတ်ပူနေတတ်ခဲ့တယ်
— နောက်ဆုံး သူ ကိုယ့်ကိုထားသွားခဲ့ရင်တောင် နောက်ထပ်ကိုယ့်ဆီပြန်လာဦးမလား ဆိုပြီး မျှော်လင့်တကြီးစောင့်စားတတ်ခဲ့သေးတယ် ..
< Heart Canteen >
မြောက်ဦးမှာလည်း မိုးသည်းပြီး ရေလျှံ
9:06:00 AM Myanmar News Updates No comments
မြောက်ဦးမြို့တွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းနေသောကြောင့် မြို့ပေါ်နှင့် ဆင်ခြေဖုန်းရပ်ကွက် အချို့တွင် ရေကြီးလျက်ရှိပါသည်။
မြောက်ဦးမြို့တွင် လွန်ခဲ့သော ငါးရက် ခန့်မှစ၍မိုးသည်း ထန်စွာရွာသွန်းနေသောကြောင့် လက်ကောက်ဈေး(ကန်ချေစု) ကြက်ဈေးရပ်ကွက် နှင့် ဆင်ချဆိပ်(ရွာသစ်)တို့တွင် လူနေအိမ်ခြေ ၂၅၀ ကျော်ခန့် ရေနစ်မြုတ်လျက်ရှိသည်။
ထိုရပ်ကွက်မှ ရေဘေးဒုက္ခသည်များ သည်နီးစပ်ရာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း များနှင့် ရေလွတ်ရာနေရာများသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လျက်ရှကြသည်။
ဓါတ်ပုံ နှင့် သတင်း : Aung Soe Myint
တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုး ရှိမည် .........
ဒီနေ့ တရားပွဲကနေ တဆင့်ခင်ခဲ့ကြသော မိတ်ဆွေတွေ
ဘုရားရှီခိုးပုံစံ အခြေခံ ပုံစံတွေ သိချင်လို့ကျွန်တော်တို့ 
ကျောင်း ဘုရားခန်းလေး စာကြည့်တိုက်ကို ရောက်ရှိခဲ့
အော် မင်းတို့ ဒီလို ဘုရားခန်းလေး လုပ်ထားတာလားတဲ့
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာတော့ ပုဂံ မန်းလေး
ဘုရားတွေ အများကြီးပါဆိုတော့ .....
သိတယ် သိတယ်မင်းတို့ နိုင်ငံက ဗုဒ္ဓ ဘာသာထွန်းကားသော
နိုင်ငံဘဲလေတဲ့ လှပတဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေရော မလား
ဟုတ်ပါတယ် ချောင်းသာ ငပလီ အစရှိတဲ့ အရာတွေရှိပါ
တယ်လို့......
ဒီလိုနဲ့ ဘုရားခန်းထဲက ထွက်တော့ အခန်းမှာ မြန်မာရိုးရာ
လက်ဖက် ထမင်းပူလေးရယ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် လက်ဆောင်
ဥထားတဲ့ ရွေဖီဦး လက်ဖက်ရည် (မြန်မာလက်ဖက်ရည်) ဆိုပြီး
ဧည့်ခံတော့ သူတို့ တွေ သဘောတကျကျ နဲ့ ပေါ့ .....
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် အခြခံဘုရားရှီခိုး နဲ့ငါးရာငါးဆယ်
နိပါတ်တော် စာအုပ်တွေ လေ့လာဖို့ ငှားပေးလိုက်ပါသေးတယ်
ပြုံးပြုံးနဲ့သူတို့ တွေ ရှာနေတာတွေကို တွေ့ သွားတော့
ပျော်ရွင်စွာ ပြန်သွားကြလေရဲ့ .......
အော်ငါတို့ နိုင်ငံဝယ် သာသနာ အလွန်ထွန်းတောက်ခဲ့ပြီး
လူဖြစ်ရတာ တော်တော်ကံကောင်းကြပါလားလို့ အတွေးတွေနဲ့ 
ကိုယ့်နိုင်ငံမှာရှိတာကို တန်ဖိုးထားနိုင်ကြဖို့ဒီနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့ရသော
ဒါန ပျော်ရွင်ကြည်နှူးခဲ့ရသော ကုသိုလ်လေးတွေရယ် ပြန်လည်
သာဓု အနုမော်ဓနာ ခေါ်ယူနိုင်ပါစေသော........ ။
မီဒီယာဥပဒေ အရေး မပြေလည်သေး
9:04:00 AM Myanmar News Updates No comments
မြန်မာ စာနယ်ဇင်း ကောင်စီက သူတို့ ရေးဆွဲ ထားတဲ့ သတင်း မီဒီယာ ဥပဒေကြမ်းကို ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဌာနက လွှတ်တော်ကို မရောက် နိုင်အောင် လုပ်နေ တယ်လို့ ရန်ကုန်မှာ လုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲမှာ ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
ဥပဒေ နှစ်ခုကို နှစ်ဘက် အပြန် အလှန် ညှိနှိုင်း ပြင်ဆင်ကြ ပြီးမှ လွှတ်တော် တင်မယ် ဆိုပြီး ပြန်ကြားရေး နဲ့ စာနယ်ဇင်း ကောင်စီတို့ အကြား သဘောတူ ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဇူလိုင်လ ၄ ရက်မှာ ပြန်ကြားရေး ဘက်ကနေ စာနယ်ဇင်း ကောင်စီ ပြင်ခိုင်းတာ တွေကို မပြင်ဘဲ လွှတ်တော် တင်ပြီး ဥပဒေ အတည်ပြု လိုက်နိုင်တဲ့ အချိန်မှာ ကန့်ကွက် မှုတွေ စခဲ့တာပါ။
ဇူလိုင်လ ၇ ရက် နေ့မှာတော့ စာနယ်ဇင်း ကောင်စီကနေ ပြန်ကြားရေး ရဲ့ ဥပဒေ ကိုကန့်ကွက် လိုက်ပြီးတော့ ၂၄ ရက် နေ့မှာ ပြန်ကြားရေး ဘက်ကလည်း စာနယ်ဇင်း ကောင်စီရဲ့ မီဒီယာ ဥပဒေ ကြမ်းကို နေပြည်တော်မှာ ထပ်ပြီး ပြင်ခိုင်း လိုက်ပါတယ်။
သတင်း မီဒီယာ ဥပဒေကြမ်းကို ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဌာနက အချက် ၁၇ ချက် ကို ထပ်ပြင် ခိုင်းလိုက်တာ ဟာ ဒီဥပဒေ ထွက်ပေါ် လာရေးကို ဟန့်တား နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်း ကောင်စီ ယာယီမှ ဦးသီဟစော က ပြောပါတယ်။
စာနယ်ဇင်း ကောင်စီက ရေးဆွဲ နေတဲ့ ဥပဒေကြမ်း ကို လွှတ်တော် မတင်ရသေး ခင်မှာ ဒီလို ပြင်ဆင် ဖို့ ပြန်ကြား ရေးဘက်က ပြော လာပေမဲ့၊ ပြန်ကြား ရေး ဘက်က တင်တဲ့ ပုံနှိပ် ဥပဒေ မူကြမ်းကို စာနယ်ဇင်း ကောင်စီက ဒီလဆန်းက ကန့်ကွက်ခဲ့ ပါတယ်။
ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဌာန ဘက်က ပုံနှိပ် ဥပဒေကို အတည်ပြုဖို့ အမျိုးသား လွှတ်တော် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အပါဝင် သမ္မတ အထိ အဆင့်တွေ ကျန်သေး သလို စာနယ်ဇင်း ကောင်စီ ကလည်း ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဌာနကို နောက်ထပ် ရှင်းလင်းရန် မရှိဆိုပြီး ပြောခဲ့ ပါတယ်။
စာနယ်ဇင်း ကောင်စီ ကတော့ သတင်း လွတ်လပ်မှု အတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ တိုက်ပွဲ ဝင်သွား မယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
ထပ်ပြင် ခိုင်းတာဟာ ဥပဒေ ထွက်ရေးကို ဟန့်တားတာ ဖြစ်တယ် လို့ စာနယ်ဇင်း ကောင်စီယာယီ ကပြော
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလိုဘ၀တွေ ဘယ်လောက်များနေပြီလဲ
9:03:00 AM Myanmar News Updates No comments
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင် ၂၀ ရက်နေ့ က ကျောက်ပန်းတောင်း ဆေးရုံ မှာ စိတ်မကောင်းစရာ အဖြစ်အပျက် တစ်ခု ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်၊ ကျမထံ ဖြစ်ပြီးကာ စမှာ သတင်းပို့ ပေးသူရှိခဲ့ပေမဲ့ ကျမကလည်း အားလပ်ရက်ရှည်နဲ့ ဆက်ပြီး ခရီးထွက်နေတာကြောင့် ဒီသတင်း ကို မ စုံစမ်းခဲ့ရပါဘူး၊
အခုမှ ကျောက်ပန်းတောင်းက မိတ်ဆွေ တွေ က ဗီဒီယို၊ ဓာတ်ပုံ၊ အသံ နဲ့ တကွ စုံစမ်းပေးကာ ကျမထံပေးပို့ ခဲ့ လို့ ဒီသတင်း တင်ပေးပါရစေ၊ လိုင်းမကောင်းလို့ ဗီဒီယိုဖိုင် နဲ့ အသံဖိုင် မရသေးပါ။
သတင်းတင်တာ နောက်ကျသွား တဲ့ အတွက် မိသားစုကို ရော သတင်းပေးပို့ သူကို အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်။
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် သံဘို ချောင်းဖျားကျေးရွာက ကိုအောင်လှိုင်ဝင်း၊ မဖြူဖြုစန်း တို့ရဲ့ လေးနှစ်ငါးလ အရွယ် သမီး ကလေး မကျော့မွန်အေး ဟာ သွေးလွန်တုပ်ကွေး လို့ ယူဆလို့ ရတဲ့ ရောဂါနဲ့ ကျောက်ပန်းတောင်းဆေးရုံမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း တို့ရဲ့ ပေါ့လျော့စွာနဲ့ ဂရုမစိုက်မှုကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ ရပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက် နေ့ ကတည်း က မြို့နယ် ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်ဇော်မိုး ရဲ့ ဆေးခန်းမှာ ကုသမှုခံယူ ခဲ့ပါတယ်။
သာမန်သာ ကုပေးခဲ့ ပြီး လက်လုပ်လက်စား ပုပ္ပားတောင်က လပ်မှာ ဈေးရောင်းနေရသူ မိသားစုက ဆေးခန်းပြ တာ နေ့စဉ် ၇၅၀၀ ကျပ်ထိ တောင်းခံတယ် လို့ ပြောပါတယ်။
ဇူလိုင် လ ၂၀ရက် မနက် ကိုးနာရီ မှာတော့ ဆေးရုံ အုပ်ကြီးဒေါက်တာအောင်ဇော်မိုးက ဆေးရုံကို လွှဲပေးပါတော့တယ်။
ဆေးရုံလွှဲပေးဖို့ ဆေးစာရေးပေးတာအတွက် ငွေ ၁၅၀၀၀ ကျပ်တောင်းခံပြီး ဖခင်ဖြစ်သူက ငွေအဆင်သင့်မရှိလို့ အခြားမိတ်ဆွေလူနာထံမှ ငွေ ၁၀၀၀၀ကျပ် ခဏချေးယူကာ တောင်းပန်၍ပေးခဲ့ ရပါတယ်။
အဲဒီနေ့ တစ်နေ့လုံး ဆေးရုံကို ဆရာဝန်ကြီးက လာမကြည့်ဘဲ ညကိုးနာရီကျော် အသက်ဆုံးပြီးကာ မှ လာရောက်ကြည့်ရှုတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တစ်နေ့လုံး ပူဆွေးသောက ရောက်နေရသူ မိသားစုကို ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုထက် (ညနေပိုင်း မှာ တစ်ခေါက်လာခဲ့တဲ့ သူနာပြု ဆရာမလေးမှအပ) ဆေးရုံဝန်ထမ်းအားလုံးက ဆူပူငေါက်ငမ်းမှု၊ ငွေတောင်းခံမှု၊ရိုင်းပြစွာ ဆက်ဆံမှုတို့သာ ပြုခဲ့တယ် လို့ မိခင်ဖြစ်သူက ပြန်လည်ကာ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အဆိုးဆုံးက တော့ သေဆုံးသူ ဟာ ဆေးရုံတက်ပြီး ၂၄နာရီအတွင်း (၁၂နာရီအကြာ) အသက်ဆုံး ခဲ့ပေမဲ့ ရင်ခွဲရုံမှာ မခွဲစိတ်ခဲ့ သလို သုဂတိရှင် နာမှုကူညီရေးအသင်း ကား က လာသယ်ရာမှာလည်း လူနာတင်ပို့ရန် ဟု တမင်သက်သက်ရေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါကို သုဂတိရှင် အသင်းတာဝန်ကျသူက လက်မခံနိုင် လို့ ပြန်လည်ပြောကာမှ အလောင်းသယ်ယူရန် ဟုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုကို ဆေးမှတ်တမ်း၊ ဆေးရုံမှ သေဆုံး၍ ဆင်းကြောင်းလက်မှတ်၊ စသည်တို့ကို ယခုအချိန်ထိ ထုတ်မပေးသေးသလို သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဟု တစ်ရွာလုံးမှ သိရှိသော်လည်း ဆေးရုံက သွေးလွန်တုတ်ကွေးဟု မိသားစုကို ယခုအချိန်ထိ မပြောခဲ့ပါဘူး။
လူတစ်ယောက် ရဲ့ စာရင်းမရှိ အင်းမရှိ၊ လက်လွတ်စပယ် ပြုခဲ့တယ် လို့ ယူဆကာ ကျန်ရစ်သူမိသားစုနဲ့ ရွာသူရွာသား အားလုံးက ခံပြင်းဒေါသထွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။
ဒီကိစ္စကြောင့် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် ပြည့်သူ့ဆေးရုံ ကို အယုံအကြည်မရှိတော့ပဲ ရွံရှာကြောက်ရွံ့ပြီး ချောင်းဖျားရွာ နှင့် သံဘို အလယ်ရွာမှ ကလေး ၁၁ယောက် ဟာ ညောင်ဦးဆေးရုံ မှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးနဲ့ ကုသမှုခံယူခဲ့ကြပါတယ်။
အခုဆို သက်သာပျောက်ကင်းလို့ တော်တော်များများ ဆေးရုံမှဆင်းခဲ့ပါပြီ။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာန ကို မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအကူအညီနဲ့ မကျော့မွန်အေးအကြောင်းကို တိုင်ကြားခဲ့လို့ ဇူလိုင် လ ၂၄ရက်မှာ တော့ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနက ရွာကို လာစစ်ရာမှာ
ပိုးလောက်လန်းကို သာ ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ရွာသားများကို သွေးလွန်တုပ်ကွေး မဟုတ်ဘဲနဲ့ နင်တို့ ပြောနေတော့ ငါတို့ကို အထက်က အဆူခံရတယ် အလုပ်ရှုပ်တယ် ဟုဆိုကာ ထပ်မံ ဆူပူကြိမ်းမောင်းခဲ့ပြီး ယခုအချိန်ထိ ခြင်ဆေးဖြန်းခြင်းစသည်တို့ကို မလုပ်ဆောင်ပေးသေး ပါဘူးဘူး ။
ညောင်ဦးမြို့ ဆေးရုံမှာ တက်ခဲ့ တဲ့ ကလေးငယ်တွေ ရဲ့ မိသားစုတွေ က အသက်ချမ်းသာရသလို စိတ်လည်းအင်မတန်ချမ်းသာခဲ့ရပါတယ် လို့ ပြောပြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မကျော့မွန်အေးရဲ့ မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းက တော့ အခုအချိန်ထိ မျက်ရည်လည်ရွဲ ဖြစ်နေသလို ကျောက်ပန်းတောင်း ဆေးရုံအုပ်ကြီးနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ကြောင့် အခြားနယ်သူနယ်သားများကို သူတို့လို ဖြစ်မှာ စိုးလို့အင်တာနက် နဲ့အခြားသတင်းမီဒီယာတွေ က တစ်ဆင့်ပြောပြပေးပါလို့ အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး ရှယ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ မကျော့မွန်အေး ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။
(ညောင်ဦးဆေးရုံမှ ဝန်ထမ်းများရဲ့စေတနာ၊ ဆက်ဆံရေး၊ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတဲ့ အကြောင်း ရွာသားများ ပြောပြလို့ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်)
၂၀၁၃ ဇူလိုင် လ ၂၉ ရက်
မကျော့မွန်အေး ဓာတ်ပုံများ၊ မိဘတို့ ဓာက်ပုံနဲ့ ဆေးခန်းပြ စာအုပ်ဓာတ်ပုံတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြပါတယ်။
Posted From မေပုပ္ပား
9:02:00 AM Myanmar News Updates No comments
9:02:00 AM Myanmar News Updates2comments
6:41:00 PM Myanmar News Updates No comments
Android ဖုန်းနဲ့ Tablet တွေမှာ မြန်မာစာနဲ့ keyboard ကိုဖုန်းထဲမှာတင် အလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်ဖို့အတွက် Myanmar Mobile Zawgyi Changer version2ကိုထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။ Myanmar Mobile Zawgyi Changer2မှာ Smart Zawgyi font , Sony Myanmar font, စံမြန်မာ font စတဲ့ အသုံးများမြန်မာဖောင့်များကို မြန်မာစာကီးဘုတ်နဲ့တကွ ဖုန်းထဲသို့ Click တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ထည့်သွင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Android 4.2 နှင့်အထက်ဖုန်းတွေအတွက် feature သစ်အနေနဲ့ မြန်မာစာလုံးများမှန်ကန်စွာမပေါ်ခြင်းကို ဖြေရှင်းပေးမယ့် Smart Zawgyi font fix features (Android 4.2.x) ကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Myanmar Mobile Zawgyi Changer2ဟာ ဖုန်းကို factory reset ချလိုက်ရင်တောင်မှ မြန်မာဖောင့်နဲ့ မြန်မာစာကီးဘုတ်ကို မပျက်သွားအောင်သွင်းပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Mobile Zawgyi Changer2ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် ဖုန်း/Tablet ကို root လုပ်ထားဖို့/Root Access ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Myanmar Mobile Zawgyi Changer2for Android ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
သိသင့်မယ် ထင်တဲ့ ဟင်းချက်ရာ
4:34:00 PM Myanmar News Updates No comments
သိသင့်မယ် ထင်တဲ့ ဟင်းချက်ရာတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဧ။် မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် အခေါ်အဝေါ်အများစုကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေလည်း ဖြည့်စွက်ပေးကြပါနော်…း)
၁။ ချဉ်ပေါင်ရွက် = Sour green, Roselle, Sorrel kenaf
၂။ ဂေါ်ရခါးသီး = Chayote/ Marrow/ Chaico
၃။ ဂေါ်ဖီထုပ် = Cabbage
၄။ ကညွတ် = Asparagus
၅။ ဟင်းနုနွယ် = Spinach
၆။ ခရမ်းသီး = Egg plant
ရ။ မျှစ် = Bamboo shoot/ elephant bamboo shoot
၈။ ဌက်ပျောပင် = Banana Stem
၉။ ပဲပြား = Bean Curds
၁၀။ ပဲပင်ပေါက် = Bean Sprouts
၁၁။ ခရမ်းချဉ်သီး = Tomato
၁၂။ ဗူးခါးသီး = Gourd
၁၃။ ဘူးသီး = Calabash
၁၄။ ကြက်ဟင်းခါးသီး = Bitter grout/ karalla fruit
၁၅။ မုန်လာဥနီ = Carrrot
၁၆။ မုန်လာဥဖြူ အကြီး = White radish, turnip
၁ရ။ ပန်းဂေါ်ဖီ = Cauliflower
၁၈။ မုန်ညှင်းဖြူ = Chinese Cabbage
၂၀။ သခွာသီး = Cucumber
၂၁။ သခွားသီးအငယ်စား = Gherkin
၂၂။ ကျောက်ဖရုံသီး = White Pumpkin
၂၃။ ရွှေဖရုံသီး = Yellow Pumpkin
၂၄။ ရုံးပတီသီး = Okra, Lady’s Finger
၂၅။ ခ၀ဲသီး = Ridged-gourd/ Ribbed gourd
၂၆။ ကြောင်လျာသီး = Trumpet flower fruit
၂ရ။ ဒညင်းသီး = Daga, Danvo fruit, Fithio clobium
၂၈။ ဒန့်ဒလွန်သီး = Drumstick
၂၉။ ရွှေပဲသီး = Green peas, snow peas
၃၀။ ဘိုစားပဲ = French Bean
၃၁။ ပဲစောင်းလျာသီး = Goa bean/ winged bean
၃၂။ ပဲကြာဇံ = Vermicelli
၃၃။ ဆန်ကြာဇံ = Rice Noodle
၃၄။ မြင်းခွာရွက် = Indian penny wort leaf
၃၅။ ကိုက်လန် = Chinese Kale
၃၆။ ကန်စွန်းရွက် = Water Spinach/ Water convolvulus
၃ရ။ ကစွန်းဥ = sweet potato
၃၈။ စိမ်းစားဥ = White potato
၃၉။ ပဲမြစ် = Gea Beam roots
၄၀။ ဂျူးမြစ် = Chive roots
၄၁။ အာလူး = Potato
၄၂။ ပြောင်းဖူး = Corn
၄၃။ မုန်ညှင်းရွက် = Mustard leaf
၄၄။ ဆလပ်ရွက် = Salad
၄၅။ ရေမုန့်ညှင်း = water cress
၄၆။ မှို = mushroom
၄ရ။ ငရုတ်သီးပွစိမ်း = Green Pepper
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်သတ္တ၀ါ အကြီးဆုံးလဲ… ကြည့်ရအောင်
4:33:00 PM Myanmar News Updates No comments
အပြာရောင်ဝေလငါး (blue whale) ကသာလျှင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး သတ္တ၀ါတော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း အခု လောလောဆယ် တွေ့ရှိခဲ့သမျှ သက်ရှိသတ္တ၀ါတွေထဲမှာ အကြီးဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်နေဆဲပါ။
အပြာရောင်ဝေလငါး ( blue whale) ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် .. သူတို့ ဟာ ၃၃ မီတာ ( ၁၀၈ ပေ) အထိ ကြီးထွားတတ်ပြီး၊ အလေးချိန် အနေဖြင့် 181 metric tons (200 imperial tons) အထိ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ နှစ်ပေါင်း ၉၀ လောက်အထိ အသက် ရှင် ရပ်တည်နေနိုင်ပြီး၊ သူ့ ရဲ့ အစာအိမ်ကဆိုရင် တနေ့ ချင်းစီမှာ 3.6 metric tons (4 imperial tons) ကို စား သောက်နိုင်ပါ တယ်။
ကဲ.. ဒီလောက်ဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်သတ္တ၀ါ အကြီးဆုံးလည်း ဆိုတာ သိလောက်ပါပြီ။
Kaung Zay Yan
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ဖြတ်သန်းခြင်းအတွက် နစ်နာကြေးတောင်းသူ ရေနံချောင်းတောင်သူ ၂ ဦးကို တရားစွဲ
4:32:00 PM Myanmar News Updates No comments
ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက် လိုင်းဖြတ်သန်းခြင်းအတွက် နစ်နာကြေး အသနားခံတင်ပြခဲ့သူ ရွှေတုတ်ကန် ကျေးရွာမှ တောင်သူ ၂ ဦးအား ယခင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းမှ တရားလိုပြု ၍ ရေနံချောင်းမြို့နယ်တရား ရုံးသို့ တရားစွဲဆိုကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။
''ကျွန်တော်တို့က အမှန်မို့လို့ အမှန်အတိုင်း တင်ပြတောင်းဆိုတာပါ။ ဘာမှ လိမ်လည်ခဲ့တာ မရှိပါဘူး။ လျော်ကြေးရဖို့ မြေတစ်ကွက် တစ် သောင်း ငါးထောင်နှုန်းနဲ့ တောင်းလို့ ဦးသူတော်က မပေးနိုင်လို့ မပေးခဲ့တာ။ ပေးနိုင် တဲ့ လက်ထုတ်ကန်ကွင်းနဲ့ ဝန် ရိုးကွင်းမြေယာပိုင်းအတွက် လျော်ကြေး ရတယ်ဗျာ။ မပေးတဲ့အပိုင်း မရဘူး။ ဒါ ကို အမှန်တင်ပြတာကို ကျွန်တော်တို့ကို ပြစ်မှု ဥပဒေပုဒ်မ (၁၈၂) နဲ့ တရားစွဲ တယ်'' ဟု တောင်သူကိုသန်းဦးမှ ပြော ပြသည်။ ပြစ်မှုကြီး အမှတ် (၅၂၆) ဖြင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ (၁၈၂) အရ ရွှေတုတ်ကန်ကျေး ရွာမှ တောင်သူ ဦး သန်းဦးနှင့် ဦးသူတော်တို့အား မြို့နယ် တရားရုံးတော်မှ ကြားနာစစ်ဆေးခံရန် လက်ခံခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ တရားစွဲဆိုရခြင်းမှာ တောင်သူ ၂ ဦးမှ ၄င်းတို့၏ ယာမြေပေါ် တွင် တရုတ်မြန်မာရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ပိုက် လိုင်း ဖြတ်သန်းရာတွင် အများနည်းတူ မြေယာနစ်နာကြေး မရရှိသဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် သက် ဆိုင်ရာသို့ အဆင့်ဆင့် တင်ပြ တိုင်တန်း ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ တိုင် တန်းရာတွင် တင်ပြမှုများ တွင်မှန်ကန် မှု မရှိ မိမိရယူလိုမှု ဆန္ဒတစ်ခုတည်း ဖြင့် အာဃာတတရား ရှေ့ ထားပြီး လိမ် လည်တိုင်တန်းသည်ဟု ဆိုကာ မကွေး ခရိုင်အထွေထွေအုပ် ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ (၇-၆-၂ဝ၁၂) နေ့စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂/ ၂၈-၂/ဦး၎ (၂၆၁၉)ဖြင့် တရားစွဲဆိုရန် ညွှန်ကြားစာထွက်ရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ထိုညွှန်ကြားစာအရ ရေနံချောင်း မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ ကိုယ်စားမြို့နယ်ဒုဦးစီးမှူးမှ လက်မှတ်ရေး ထိုးကာ ရွှေတုတ်ကန်ကျေး ရွာ အုပ်ချုပ် ရေးမှူးဟောင်း၊ ရွာခွဲရွာ အိမ်မှူး၊ မြေစာ ရင်းဦးစီးဌာန မှ မြေတိုင်းစာရေး ၂ ဦး အားတရားလိုပြုလုပ်တိုင်ကြားရန်အမိန့် စာအမှတ် ၂/၁၃-၁/ဦး ၄ (၇၅၃) ဖြင့် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်ဇွန်လ ၁၄ရက်တွင်ညွှန်ကြား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတို့ ၏ ညွှန်ကြားချက် စာ တစ်နှစ်အကြာတွင်မှ တရားစွဲဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းလည်း စတင်ဆောင် ရွက်နေပြီ ဖြစ်သည်။
အမှုအား စတင်စစ်ဆေးကြားနာ နိုင်ရန်အလို့ငှာ ဇူလိုင် ၂၄ ရက် သို့ ပြန် လည် ဆင့်ဆိုလိုက်ပြီး တရားစွဲဆိုခံ တောင်သူများအနေဖြင့် မမှန်မကန် တရားစွဲဆိုထားခံရမှုအပေါ် နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းခရိုင်ဌာန အသီးသီးသို့ အကူအညီတောင်းခံစာ များ ပေးပို့၍ တရားမျှတမှု ဖြစ်အောင် တင်ပြတောင်းဆိုသွားမည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
အင်္ဂလန် ကမ်းခြေတစ်ခု၌ နဂါး ဦးခေါင်းရိုးတစ်ခု တွေ့ ရှိခဲ့သည်
4:31:00 PM Myanmar News Updates No comments
တနင်္လာနေ့ မနက် ( ၁၅.၇.၂၀၁၃) က အင်္ဂလန် နိုင်ငံ၊ Jurassic ကမ်းခြေတစ်ခု မှာ နဂါး အရိုးဦးခေါင်ခွံ တစ်ခုကိုတွေ့ ခဲ့ရ လို့အံ့သြမှင် သက်စွာ ကြည့်ရှု့ နေခဲ့ကြပါတယ်။ ဦးခေါင်းရိုးခွံရဲ့ အရွယ်အစာ ဘတ်စ် ကား တစ်စီးရဲ့ အရွယ်အစား လောက်ရှိပါတယ်။
တကယ့်နဂါး ဦးခေါင်းရိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ UK နိုင်ငံမှာ ခေတ်းစားနေတဲ့ TV series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Game of Thrones” season3အတွက် လူအများ စိတ်ဝင်စားလာမှု ရရှိအောင် ကြော်ငြာ ခြင်းပါ။
ဦးခေါင်းခွံရိုးက အရှည်ပေ ၄၀ ၊ အကျယ် ၈ ပေ နဲ့ အမြင့် ၉ ပေ ရှိပြီး၊ ပန်ပုဆရာ တစ်စု က အချိန် နှစ်လ ခန့် ကြာ အောင် ပုံဖော်ထုဆစ်ခဲ့ပြီး ဆေးခြယ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ်းခြေကို လာရောက်အပန်းဖြေကြတဲ့ လူတွေ အံ့သြသွားစေရန် အတွက် ည သန်ခေါင်ကျော် အချိန်မှာ လန်ဒန် ကနေ သယ်ဆောင်လာပြီး Jurassic ကမ်းခြေမှာ တိတ်တဆိတ် ထားရှိ ခဲ့တာပါ။
ပန်းပုဆရာတွေက TV series ထဲမှ ဇာတ်ကောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Arya Stark (Maisie Williams) ရှာဖွေ တွေ့ ရှိခဲ့တဲ့ နဂါး ဦးခေါင်းရိုး ကို ပုံတူပြုလုပ်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(August Myanmar Media Group)
လှိုင်သာယာ ပဒံကျေးရွာ လယ်သိမ်းခံလယ်သမားတို့ လျော်ကြေးညှိနှိုင်းပေးရန် တောင်းဆို
4:29:00 PM Myanmar News Updates No comments
လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ပဒံကျေးရွာရှိ လယ်သမားတို့က ၀ါဝါ၀င်းကုမ္ပဏီသည် လယ်မြေများ သိမ်းယူသည်ဟု စွပ်စွဲကာ လျော်ကြေးကိစ္စအတွက် ညှိနှိုင်းပေးရန် ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်တွင် တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ပဒံကျေးရွာရှိ အနော်ရထာစက်မှုဇုန်တွင် လယ်သိမ်းခံလယ်သမားတို့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ကာ တောင်းဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ သိမ်းဆည်းထားသည့် လယ်မြေများကို အပိုင်း ၁ နှင့် ၂ ဟူ၍ နှစ်ပိုင်းခွဲထားရာ အပိုင်း ၁ လယ်သမားများက လျော်ကြေးရယူလိုခြင်း ဖြစ်သည်။
လယ်မြေ အပိုင်း ၂ ဘက်မှ လယ်သမားတို့သည် ဂရုဏာကြေး ရရှိဆဲဖြစ်သော်လည်း အပိုင်း ၁ ဘက်မှ လယ်သမားတို့မှာ နစ်နာကြေး မရရှိသေးဟု ဆိုသည်။ “အမြန်ဆုံး ညှိနှိုင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုတာပါ။ သူတို့ ဘက်က လယ်သမားတွေကို နစ်နာကြေးပေးဖို့ ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပေမယ့် ခုချိန်ထိ မရရှိခဲ့ပါဘူး”ဟု အပိုင်း ၁ နယ်မြေမှ လယ်သမားကိုပေါက်က ပြောခဲ့သည်။
အပိုင်း ၁ တွင် အဆောက်အအုံဆောက်ထားသည့် လယ်ယာမြေများကို နစ်နာကြေး အမြန်ဆုံးပေးရန်၊ ခြံစည်းရိုးခတ်ထားသည့် လယ်ယာမြေများအတွက် ညှိနှိုင်းရန်နှင့် လစ်လပ်နေသည့် လယ်ယာမြေများကို ပြန်ပေးရန်လည်း လယ်သမားတို့က တောင်းဆိုသည်။
လယ်မြေများ သိမ်းယူသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် ၀ါဝါ၀င်းကုမ္ပဏီကမူ လယ်မြေများ ပြန်ပေးရန်မှာ ၀ါဝါ ၀င်းနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲ လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းခံရမှုများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်နှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု ကုမ္ပဏီ၏ အကြီးတန်းအရာရှိက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“လယ်ယာမြေတွေကို ပြန်ပေးဖို့က ၀ါဝါ၀င်းနဲ့ မဆိုင်တော့ပါဘူး။ လယ်ယာမြေ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ ညှိ နှိုင်းထားပြီးသားပါ။ မပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ပေးတယ်။ သူတို့လက်မခံတာတော့ မသိဘူး။ ဒီမြေကလည်း နိုင်ငံတော်ကပိုင်တဲ့မြေတွေပါ။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ အကုန်ရှိပြီးသားပါ”ဟု ပြောသည်။
အပိုင်း ၁မှ အသိမ်းခံ လယ်မြေဧကပါင်း ၃၇၀ ကျော်ရှိပြီး လယ်သမားဦးရေ ၄၀ ကျော်ရှိကာ ၎င်းင်းတို့မှာ ဂရုဏာကြေး လုံးဝ မရရှိသေးဟု လယ်သမားတို့က ဆိုသည်။ ၀ါဝါ၀င်း အပိုင်း၂ မှ အသိမ်းခံ လယ်ဧက ပေါင်း ၃၀၀ နီးပါးရှိကာ ဧက ၁၀၀ ကျော်မှာ ဂရုဏာကြေး ရရှိပြီဖြစ်ပြီး ကျန်ဧကများကို ဆက်လက်၍ ဂရုဏာကြေး ပေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အပိုင်း ၁ ဘက်မှ လယ်သမားဖြစ်သူ ကိုကြည်ရွှင်က ပြောသည်။
လယ်မြေ သိမ်းခံရမှုများအတွက် လယ်သမားတို့က ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် ဆန္ဒပြမှုများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြ သည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်မှဟု ယူဆရသည့် အလွန်ကြီးမားသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသစ် တစ်မျိုး သိပ္ပံပညာရှင်များ တွေ့ရှိ
ပြင်သစ်သိပ္ပံ ပညာရှင်များသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တွေ့ဖူးသမျှ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးများအနက် အကြီးမားဆုံးဟု ယူဆရသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသစ် တစ်မျိုးကို တွေ့ရှိထားကြောင်း သိရသည်။
၎င်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို Pandoravirus ဟု အမည်ပေးထားပြီး ၎င်း ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ အရွယ်အစားမှာ အခြားသော ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးများ၏ အရွယ်အစား ဆယ်ဆခန့် အထိ ရှိသောကြောင့် အလွန်ကြီးမားသော ပိုးတစ်မျိုး ပင်ဖြစ်သည်။
၎င်းပိုး၏ မျိုးဗီဇ ၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် ယခင်ကမ္ဘာတွင် တွေ့မြင်ခဲ့ဖူးသမျှ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအရွယ်နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် ရှေးခေတ် ကာလတစ်ခု သို့မဟုတ် အင်္ဂါဂြိုဟ်ကဲ့သို့သော အခြားဂြိုဟ် တစ်ခုမှ ရောက်လာ ဖွယ်ရှိသည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင် များက ယူဆထားကြသည်။
Pandoravirus ပိုးများသည် ရေအောက်တွင် နေထိုင်တတ်ကြပြီး ၎င်းတို့ကို ချီလီကမ်းလွန် ရေပြင်များနှင့် သြစ တြေးလျရှိ ရေအိုင်တစ်အိုင်တွင်
Read More >> http://www.myawady.com.mm/knowledge/incredibleworld/other-case/item/20208-2013-07-22-13-49-35
4:27:00 PM Myanmar News Updates No comments
1 အမေရိကန် USD = Ks 974(~) Ks 984(~)
1 စင်္ကာပူ SGD = Ks 763(~) Ks 775 (~)
1 ဥရောပငွေ EUR = Ks 1279(~) Ks 1297 (~)
USD 1 ဒေါ်လာနှင့်ညီမျှငွေ
စင်ကာပူ SGD 1.2673(-0.0005)
ထိုင်း Baht 31.0800(+0.0800)
မလေးရှား Ringgit 3.1960 (+0.0065)
တရုတ် Yuan 6.1357 (-0.0048)
အိန္ဒိယ Rupee 58.9950 (-0.1412)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် Taka 77.9100 (+0.0650)
တောင်ကိုရီးယား Won 1116.0400(+2.4401)
ထိုင်ဝမ် TWD 29.9370(-0.0330)
ဂျပန် Yen 99.9270 (-0.3425)
ဥရောပငွေ EUR 0.7568(-0.0008)
သြစတြေးလျ AUD 1.0936 (+0.0028)
အင်္ဂလန် Pound 0.6505 (-0.0025)
1 အောင်စ USD 1320.0400(-1.7600)
Ks 698,600 (~)
Premium Diesel (1L) Ks 940
Diesel (1L) Ks 920
Octane (95) (1L) Ks 1080
Octane (92) (1L) Ks 920
ဓာတ်ဆီ (1L) Ks 814
မိုးယုစံ ယောက်ျားယူတော့မည်................ဆိုလျှင် သရုပ်ဆောင် မိုးယုစံက မိဘတွေ ချမ်းသာခြင်းထက် ကိုယ် ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်နိုင်မည့်ေ...
Viber Application လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Andr...
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒစနစ် အမှားကြောင...
မန္တလေး မုဒိမ်းမှု ထက်ဝက်ကျော် ကလေးများတွင် ဖြစ်ပွား...
အနုပညာ အမျိုးမျိုး ဖန်တီးခွင့်ရှိလာသူ ချမ်းမီမီကို...
နွားထိုးကြီးတွင် မိုးခေါင်၍ နှမ်းစိုက်ခင်းအားလုံးဆ...
အတိုက်အခံများ ကန့်ကွက်သော်လည်း ကူဝိတ် ရွေးကောက်ပွဲ...
ကောင်းကျိုးမပေးသည့် ဆေးလ်ိပ်ကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ဖြ...
အမျိုးသမီးများကို ဝမ်းဗိုက်နာကျင်စေခြင်း အကြောင်းရ...
အင်္ဂလန် ကမ်းခြေတစ်ခု၌ နဂါး ဦးခေါင်းရိုးတစ်ခု တွေ့ ...
လှိုင်သာယာ ပဒံကျေးရွာ လယ်သိမ်းခံလယ်သမားတို့ လျော်ြေ...
အင်္ဂါဂြိုဟ်မှဟု ယူဆရသည့် အလွန်ကြီးမားသော ဗိုင်းရပ်စ...